WAR-BIXIN: Xiisadaha ka dhashay Diyaarad Turkigu ka soo riday Ruushka, Halkay ku dambeeyeen Duuliyeyaashii waday iyo Wararkii u dambeeyey | Saxil News Network
WAR-BIXIN: Xiisadaha ka dhashay Diyaarad Turkigu ka soo riday Ruushka, Halkay ku dambeeyeen Duuliyeyaashii waday iyo Wararkii u dambeeyey
Ankara/Moscow (SAXILNEWS)_Waxaa sii xoogeysanaysa xiisadda ka dhalatay Diyaaradii militariga ee Ruushka oo uu dalka Turkiga Salaasadii ku soo riday meel u dhaw xaduudda Siiriya iyo Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradan Ruushka oo ahayd nooca SU-24 in ka badan 10 jeer digniin la siiyey ka hor inta ayna soo ridin laba diyaaradood oo uu leeyahay Turkiga oo ahaa nooca F16.
Dhinaca Ruushka ayaa sheegay in diyaaradooda dul mareysay meel 1km u jirtay Xaduudda Turkiga, isla-markaana ku sugneyd hawada Siiriya, waxay sheegeen in diyaaradda ku dhacday meel 4km gudaha Siiriya ah.
Raysal-wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu oo daqiiqado kadib shilkaasi la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay inay digniin u tahay caalamka oo dhan in Turkiga diyaar u yahay inuu difaacdo dhulkiisa iyo hawadiisa.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo isaguna saacad kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in falkan uu la mid yahay “Mindi dhabar lagaga muday Ruushka” isagoona talaabada Turkiga qaaday ku tilmaamay mid lagu taageerayo kooxda ISIS.
Wuxuu Putin sheegay in falkan ay jawaab ka bixin doonaan isla markaana saameyn xun ku yeelan doonto xidhiidhka labada dal.
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan oo isagan habeen hore Warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay eedaynta Putin, isagoo sheegay in diyaaradda Ruushka ay duqeyneysay kooxo aan ahayn ISIS, deegaanka xaduudda Turkiga u dhaw ee Ruushka duqeenayey ayna joogin kooxda ISIS, balse waxaa ka dagaalama kooxo u badan Qawmiyadda Turkiga ee ku nool Waqooyiga Siiriya.
Erdogan ayaa sheegay in marar badan Ruushka looga digay inay ku soo xad-gudbaan hawada Turkiga.
Labadii duuliye ee waday diyaaradda ayaa iyagu ka booday diyaaradda inteyna qarxin, balse intii ay ku dageyeen baarashuudka ayaa waxaa rasaas oodda kaga qaaday kooxaha mucaaridka Siiriya ee ku sugan xaduudda labada dal.
Waxaana internetka lagu shaaciyey filim muujinaya meydka mid kamid ah duuliyayaasha Ruushka oo ay ku hareeraysan yihiin dagaalyahanada loo yaqaan Turkman oo ka dagaalama waqooyiga Siiriya.
Wararka ugu danbeeyey ee soo baxaya ayaa sheegaya in Duuliyihii labaad ee Ruushka ay soo furteen ciidamada Siiriya oo la geeyey saldhiga Ruushka ku leeyahay magaalada Latakiya, sida ay sheegeen Ruushka.
Ciidamada Ruushka ayaa laba diyaaradood oo nooca helikobterka ah u diray inay u gurmadaan duuliyayaasha balse diyaaradahaasi ayaa mid kamid ah lasoo riday kadib markii ay duqeyn xoogleh kala kulmeen kooxaha mucaaridka ee ku sugan deegaankaasi. Ruushka ayaa qiray in mid kamid ah diyaaradahooda Helikobterka khasaare kasoo gaadhay xili ay hawlgal ku jirtay.
Dowladda Turkiga ayaa Doraad gelinkii dambe isugu yeedhay kulan deg-deg ah oo ay yeesheen Madaxda dalalka NATO kulankaasi oo ka dhacay xarunta NATO ee Brussels ayey dowladda Turkiga faah faahin kaga bixisay diyaaraddii ay soo rideen iyo xad-gudubyada Ruushka ku hayo hawada Turkiga.
Dalalka Xubnaha ka ah NATO oo xiligan aan dooneyn xiisad kale oo ay la galaan Ruushka ayaa ku booriyey dalka Turkiga inuu is-xakameeyo kana fogaado waxa keeni kara xiisad khatar ah.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa laftiisa khadka telefonka kula hadlay Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo uu kula taliyey in xal wada hadal lagu dhameeyo cabashada dalkiisa ka qabo hawlgalada Ruushka.
Dowladda Turkiga ayaa in muddo ah ka cabaneysay duqeynta Ruushka ka wado xaduudda u dhaxeysa Turkiga iyo Siiriya, goobahaasi oo ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaridka Siiriya ee taageerada ka hela Turkiga, kooxahaasi ayaa intooda badan kasoo jeeda qawmiyada Turkida ee waqooyiga Siiriya ku dhaqan.
Turkiga ayaa ka xumaaday duqeynta sii socota ee Ruushka ku wado jabhadaha qawmiyada Turkiga taasi oo keentay in marar badan uu digniin u diro Ruushka, wuxuu sidoo kale Turkiga horey u soo riday Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee Drone oo uu Ruushka lahaa.
Shacabka dalka Turkiga ayaa sidoo kale si weyn uga soo horjeeda Duqeynta Ruushka ku wado jabhadaha Qawmiyada Turkiga ee Waqooyiga Siiriya, arrintaasi oo la rumeysan yahay inuu yahay cadaadiska ugu weyn ee ku khasbay dowladda Turkiga inay talaabadan qaado.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka Sergie Lavrov oo lagu waday inuu Shalay tago dalka Turkiga ayaa baajiyey safarkiisa, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay jartay dhammaan xidhiidhka laheyn dalka Turkiga.
Ruushka ayaa sidoo kale ugu baaqay Shacabkiisa inayna u dalxiis tagin dalka Turkiga, sanad walba ayey Malaayiin Ruush ah u dalxiis tagaan dalka Turkiga.
Balse waxaan hadda muuqan talaabo weyn oo uu Ruushka ka qaadi karo Turkiga.
Dowladda Ruushka uma furna xiligan inay talaabo militari ka qaaddo dalka Turkiga taasi oo keeni karta dagaal ay la galaan NATO maadaama Turkiga xubin muhiim ah ka yahay isbaheysiga NATO.
Sidoo kale Ruushka kuma soo rogi karo xayiraad dhaqaale dalka Turkiga oo in ka badan 60% Gaaska dabiiciga ah kasoo iibsada Ruushka, maadaama Ruushka uu u baahan yahay lacagtaasi kasoo gasha dhanka Turkiga.
Dalxiisayaasha Ruushka ayaan u muuqan inay sidoo kale joojin doonaan booqashada dalka Turkiga oo ah goobaha ay ugu jecel yihiin inay u dalxiis tagaan.
Caqabadahan ayaa sidoo kale dhaawac siyaasadeed ku ah Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin oo isagu isu muujiya inuu yahay hoggaamiye adag oo jawaab deg-deg ah bixiya, balse hadda weji gabax kala kulmay Talaabadan adag oo lama filaanka ah ee uu Turkiga kala horyimid.